Hiran State - News: HS:- Xaflad lagu soo dhaweynayey madaxweynaha cusub
HS:- Xaflad lagu soo dhaweynayey madaxweynaha cusub
HS:- Waxaa wali ka socda wadamada ay ku badan yahiin jaaliyada Soomaaliyeed ee qurbaha xaflado lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyada federalak Soomaaliya Prof Hasan Sh Mohamud.
Xafladan lagu qabtay magaalada Toronto ayaa aheyd midii ugu weyneyd oo ay waayadan iskugu yimaadaan jaaliayda Soomaaliyeed ee dalkaasi Kanada iyagoo dadweynahii ka soo qeybgalay ay ka kala yimaadeen dhamaan magaalooyinka ku teedsan magaalada Toronto.
Magaalada Toron oo sida la rumeysan yahy ay ku nool yahiin Soomaalida ugu badan waqooyiga America ayaa waxaa maalmahii tagay ka socday qaban qaabada xafladan oo siweyn looga dareemayey shacabka ku dhaqan magaalada.
Sidoo kale waxaa xaflada ka soo qeybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo waliba siyaasiyiin ka tirsan baarlamaanka gobolka ay xafladu ka dhacedysay ee Otario kuwaasi oo ay soo casuumeen qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ee dalkaasi.
Inkasta oo aan halkaan lagu soo koobi karin qaabkii ay u dhacsay xaflada hadane waxey bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto muujiyeen sida ay ugu faraxsan yahiin doorashada madaxa cusub ee Soomaalida siiba madax weynah iyo gudoonka baarlamaanka.
Ma ahan oo kaliya magaalada Toronto halka ay ka dhacday xaflada waxaa jira wadamo badan oo ka mid ah Yurub iyo America oo sidan oo kale looga soo dhaweeyey doorashada madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyada Federalka Soomaaliya Prof Hasan Sh Mohamud.
La soco hadba heerka ay qurbaha ka mareyso taageerada loo hayo madaxweynaha cusub inagoo isku dayo doona hadba intii aanu ka gaarno in aanu bulshada u soo bandhigno.
· admin on September 22 2012 19:55:11 · 0 Comments · 2358 Reads ·
14,637,721 unique visits